War DegDega Qarax Saaka Ka Dhacey Magaalada Gaalkacayo Iyo Madax Sare Oo Putland Ah Oo Ku Dhimatey+Sawiro) | Berberatoday.com
War DegDega Qarax Saaka Ka Dhacey Magaalada Gaalkacayo Iyo Madax Sare Oo Putland Ah Oo Ku Dhimatey+Sawiro)
Galkacayo(Berberatoday.com)-Wararkii ugu dambeyay ee aan ka helnay magalada galkacyo cirifkeeda waqooyi waxa u sheegaya in ay sii kordheysa qasaaraha ka dhashayq arax saakay ka dhacay goob ay isugu yimaadaan dad shacab ah oo ku taala bartamaha magalada.
Inta la hubo 7 qofood ayaa ku geriyooday oo uu ku jiro Ruuxii ismiidaamiyay ee naftiisa haligayiy waxaana jira dhaawacyo dad shacab ah .
Bartilmaameedka qaraxa waxaa uu ahaa Agaasimaha Wasaarada Maaliyada Gobolka Mudug ee maamulka Puntland Siciid Cali Yuusuf (Gaadayare) waxaana agaasimaha iyo askar ilaaladiisa ahaay ay ku ruux baxeen goobta qaraxu ka dhacay dhamaantood .
Qofka Isqarxiyay waxa la sheegay in uu ahaa wiil dhalinyaro ah waxaana uu yimaaday meel aan sidaas uga fogeyn halka uu fadhiyay Agaasimaha dhintay waxaana la sheegay in uu salaamay ka dibna uu waxyar ka dib is qarxiyay .
Ciidamada Amaanka puntland ayaa durbadiiba soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay oo aheyd meel u dhaw Hoteel lagu magacaabo uunlaaye baaritaano ayeyna ka sameeyeen.
Maamulka Puntland gaar ahaan Wasaarada Maaliyada weli kama aysan hadlin qaraxa lagu dilay allah ha u Naxariiste Agaasimii Wasaarada Maaliyada gobolka Mudug Siciid Cali Yuusuf (Gaadayare)